I-Eden Barn, uGuqulo lweBhadi yenkulungwane ye-18
Uvimba sinombuki zindwendwe onguSandra
Igumbi le studio elizimeleyo elizimeleyo kuguqulo lwe18th Century Sandstone Barn.
I-Barn ibekwe kwiindonga zoMlambo i-Edeni kunye nemibono engaphazamisekiyo.
Le ndlu isandula kulungiswa ilungele iindwendwe ezijonge isiseko kwindawo ezolileyo kodwa ikufutshane nendawo enomtsalane yeSithili saseLake.
Ifanelekile izibini okanye ukuhlala umntu omnye
Indawo yokuhlala yabucala ebekwe ngaphandle
Ipakethe yokwamkela equlathe isidlo sakusasa esisisiseko
I-Eden Barn yinguquko yangoku yesitora kwindawo yasemaphandleni. Ibekwe ngokufanelekileyo iikhilomitha ezi-3 ukusuka kwi-M6.
Indawo yokuhlala ephantsi
Imigangatho yekalika kunye nokufudumeza ngaphantsi
Kunye negumbi lokuhlambela leen-suite
Ibhedi ephindwe kabini, isofa, itafile yokutyela
I-oven edibeneyo / i-microwave, izixhobo ze-Bosch
Wi-Fi kunye ne-Alexa
Njengoko iligumbi elinye elinegumbi lokulala, ayizifanelanga ncam izinja. Siyazithanda izinja kwaye sinenye iholide cottage approx. Umgama ozimayile ezi-1, i-Eden Cottage, iLittle Corby, elungele izinja kwaye iku-Airbnb.
4.98 · Izimvo eziyi-209
Iimayile ezi-1 ukusuka kwilali entle ye-wetheral kunye nebhaso eliphumelele ibhaso le-Wheatsheaf Pub, iPot Pot Café kunye nePosi. Kananjalo iFantails yokutyela kunye neHotele yeCrown kunye neKlabhu yoLonwabo. Ilali inelali enkulu eluhlaza eneendawo ezihamba emaphandleni ecaleni komlambo i-Eden.
Iimayile ezi-0.5 ukusuka eWarwick e-Eden kunye ne-Queen Inn
Iikhilomitha ezingama-75 ukusuka eWarwick Bridge kunye neSallys Café kunye nevenkile yeCo-op jikelele
Sisenokungabikho apha ukuze sidibane nawe ngokobuqu xa ufika kodwa sisebumelwaneni. Ukuba ufuna naluphi na ulwazi okanye sinokukunceda nangayiphi na indlela, nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi.
Kukho izitshixo ezikhuselekileyo zofikelelo.
Sisenokungabikho apha ukuze sidibane nawe ngokobuqu xa ufika kodwa sisebumelwaneni. Ukuba ufuna naluphi na ulwazi okanye sinokukunceda nangayiphi na indlela, nceda ungathandabuzi u…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wetheral